Fetal Alcohol Syndrome (အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ) - Hello Sayarwon
Fetal Alcohol Syndrome (အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ) ကဘာလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အရက်သောက်ခြင်းက မွေးလာမည့်ကလေး၌ မွေးရာပါချို့ယွင်းမှုများနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု မကောင်းမွန်ခြင်းတို့အား ဖြစ်စေပါသည်။ အချက်အလက်များအရ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အရက် (ဘီယာ၊ ဝိုင် စသည်) တို့သည် ကာကွယ်နိုင်သော မွေးရာပါချို့ယွင်းမှုနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု မကောင်းမွန်ခြင်းတို့အားဖြစ်စေသော အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။
သားအိမ်တွင်ရှိနေဆဲကလေးများ အရက်နှင့်ထိတွေ့ရသည့်အခါ အရက်ကြောင့်ဖြစ်သော သန္ဓေသားမူမမှန်ရောဂါများအုပ်စု (FASDs) ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုရောဂါများတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အပြုအမူဆိုင်ရာနှင့် သင်ကြားသင်ယူမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာအမျိုးမျိုး ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုးဝါးဆုံးသော FASD မှာ အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ (FAS) ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
Fetal Alcohol Syndrome (အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လူဘယ်လောက်များများတွင် FASDs ရောဂါ ရရှိနေကြောင်း တိတိကျကျမသိရပါ။ အမျိုးမျိုးသော လေ့လာမှုများတွင် FASDs ရောဂါနှင့် ကြီးပြင်းလာရသောလူများကိုသာ တွက်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ FASDs တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်ခြင်းမှဖြစ်လာသော ရောဂါအမျိုးမျိုးပါဝင်ပါသည်။ အတိအကျဆိုရလျှင် အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ (FAS) မှာ အဖြစ်အများဆုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး များစွာသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ မူမမှန်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Fetal Alcohol Syndrome (အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်နှာအင်္ဂါများ မပီသခြင်း ဥပမာ မျက်လုံးသေးခြင်း၊ အပေါ်နှုတ်ခမ်း ပုံမှန်မဟုတ်လောက်အောင် ပါးလွန်းခြင်း၊ တိုတိုနှင့်လန်နေသောနှာခေါင်း၊ နှာခေါင်းနှင့် အပေါ်နှုတ်ခမ်းကြား အရေပြား ပြောင်ချောနေခြင်း။
အဆစ်၊ ခြေလက်နှင့် ခြေချောင်းလက်ချောင်းများ ပုံစံမမှန်ခြင်း
မမွေးခင်ရော မွေးပြီးနောက်တွင်ပါ ခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားမှု နှေးခြင်း
ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းခြင်း၊ သင်ကြားသင်ယူမှုဆိုင်ရာ မူမမှန်ရောဂါများနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း
အာရုံစိုက်ရခက်ခဲခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက် လက်ခံရယူနိုင်စွမ်းနည်းပါးခြင်း
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
အလွန်အမင်းကြောက်လန့်တတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တက်ကြွလွန်ခြင်း
တခြားသူများနှင့် ဆက်သွယ် ပြောဆိုရာတွင် ပြဿနာရှိခြင်းများ
အလုပ်တစ်ခုမှ တစ်ခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းရာတွင် ကျင့်သားရမလွယ်ခြင်း
ပန်းတိုင်တစ်ခုရောက်ရန် လုပ်ရာ အစီအစဉ်ဆွဲရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
သင့်၌ကိုယ်ဝန်ရှိသော်လည်း အသောက်မရပ်နိုင်ပါက သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
စေလျင်စွာသိရှိကုသခြင်းက အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါနှင့် မွေးလာနိုင်မည့်ကလေးအတွက် ရေရှည်ပြဿနာများကို လျော့ချပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်ထားခဲ့မိပါက ကလေးဆရာဝန်ကို ပြောပြပေးပါ။ ပြဿနာပေါ်လာမှ အကူအညီရှာခြင်းမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
ကလေးမွေးစားမည်ဆိုပါကလည်း မိခင်းအရင်းမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ မသိနိုင်ပါ။ အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါမှာ ကနဦးတွင် ပေါ်လာချင်မှ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော် ကလေးတွင် သင်ကြားမှုဆိုင်ရာရောဂါများ အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများ ရှိနေပါက ဆရာဝန်များနှင့်ဆွေးနွေးခါ အောက်ခံအကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Fetal Alcohol Syndrome (အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်မိသည့်အခါ –
အရက်မှာ သွေးထဲမှတစ်ဆင့် အချင်းကိုဖြတ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲသန္ဓေသားဆီသို့ ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။
သွေးတွင်းအရက်ပမာဏမြင့်တက်လာခြင်းက သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲသန္ဓေသားတွင် ပိုများလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သန္ဓေသားမှာ လူကြီးလောက် အရက်ကိုခြေဖျက်နိုင်သည် မဟုတ်ပါ။
အရက်သည် သန္ဓေသားဆီသို့ အောက်စီဂျင်နှင့် အကောင်းဆုံးအာဟာရများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အနှောက်အယှက်ပေး၏။ မမွေးခင် အရက်နှင့်ထိတွေ့မိခြင်းက တစ်ရှူးနှင့် အင်္ဂါများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကလေးတွင် ထာဝရဦးနှောက်ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်များလေလေ မမွေးသေးသောကလေးတွင် အန္တရာယ်ပိုဖြစ်လေလေပင်။ သို့သော် အရက်နည်းနည်း များများ အန္တရာယ်ရှိသည်ကို သိထားပါ။ သင့်ကလေး၏ ဦးနှောက်၊ နှလုံးနှင့် သွေးကြောများမှာ သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း မသိခင်မှာပင် ဖွံ့ဖြိုးစပြုနေပြီဖြစ်သည်။
မျက်နှာသွင်ပြင်များ ချို့ယွင်းခြင်း၊ နှလုံးနှင့် တခြားအင်္ဂါများ၊ အရိုးများ၊ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် ပျက်ယွင်းခြင်းများမှာ ပထမကိုယ်ဝန်သုံးလအတွင်း အရက်သောက်မိပါက ဖြစ်လာနိုင်သော ရလဒ်များဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်သည် ကလေးအတွက် အဓိကသော့ချက်အင်္ဂါများ ဖွံဖြိုးနေသောအချိန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဘယ်အချိန်မဆို အရက်သောက်မိတိုင်း အန္တရာယ်ဖြစ်သည်ကို သိထားရပါမည်။
ငါ့ဆီမှာ Fetal Alcohol Syndrome (အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်ပိုသောက်မိလေလေ ကလေးတွင်ပြဿနာပေါ်နိုင်ချေ မြင့်လေလေဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စိတ်ချလက်ချသောက်နိုင်သည့် အရက်ပမာဏဆိုသည်မှာလဲ မရှိပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း မသိခင်မှာ ကလေးကို အန္တရာယ်ထဲ တွန်းပို့သလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်…
Fetal Alcohol Syndrome (အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါကိုစောစောသိလေလေ ရလဒ်ကောင်းလေလေဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကလေးတွင် FAS ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တွေးပူမိလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်မိလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ကလေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် နှလုံးခုန်မူမမှန်သည့်အသံများအပြင် တခြားနှလုံးပြဿနာများကို တွေ့ရနိုင်ပါသည်။ ကလေးကြီးလာသည်နှင့် ထိုလက္ခဏာများမှာ ရောဂါကို အတည်ပြုပေးလာနိုင်ပါသည်။ တခြားလက္ခဏာတစ်ချို့မှာ…
မျက်နှာသွင်ပြင် ချို့ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အရိုးကြီးထွားမှုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း
တစ်ယောက်ယောက်ကို FAS ရှိမရှိ အတည်ပြုရန်အတွက် ဆရာဝန်သည် မျက်နှာသွင်ပြင် ချို့ယွင်းမှု၊ ပုံမှန်ထက်ကြီးထွားနှုန်းနှေးမှုနှင့် တခြားဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ပြဿနာများကို ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအာရုံကြောစနစ်ပြဿနာများတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာပါ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
Fetal Alcohol Syndrome (အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
FAS ဆိုတာကုသလို့မရသော်လည်း တစ်ချို့လက္ခဏာများကိုတော့ ကုသနိုင်၏။ ရောဂါကို စောစောအတည်ပြုနိုင်လေလေ တိုးတက်မှုကောင်းကောင်း ဖြစ်နိုင်လေလေပင်။ FAS ဖြစ်နေသည့်ကလေးတစ်ဦး၏ လက္ခဏာဖော်ပြချက်ပေါ်မူတည်ကာ ဆရာဝန်များစွာ အထူးကုများစွာနှင့်တော့ ပြသရန် လိုပါလိမ့်မည်။ အထူးပြုထားသော ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများက ကလေးငယ်များအတွက် အထောက်အကူရနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘာသာစကားကုထုံးဆရာများသည် လမ်းလျှောက်တတ်စ ကလေးငယ်လေးများ ဘာသာစကားသင်ယူရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
FAS ကလေးများအတွက် အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်ပြီး မေတ္တာပြည့်ဝသောမိသားစုမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။ ပြိုကွဲပျက်စီးမှုကို သာမာန်ကလေးများထက် သူတို့က ပိုခံစားလွယ်ကြ၏။ FAS ကလေးများသည် အိမ်တွင်အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း မညှာမတာ ဆက်ဆံခံရခြင်းမျိုးနှင့် ထိတွေခဲ့ရပါက နောက်ပိုင်းဘဝတွင် ဆေးသုံးခြင်း အကြမ်းဖက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ထိုကလေးများကို ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ပါ စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်ဖို့ အပြုအမူကောင်းဖို့ ဆုပေးစနစ်လို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းများနှင့် ဖွံဖြိုးအောင်လုပ်နိုင်ပါသည်။
FAS ကိုကုနိုင်သည့် ဆေးအတိအကျမရှိပါ။ သို့သော် လက္ခဏာများကို သက်သာစေမည့် ဆေးများစွာ ရှိပါသည်။
ဝမ်းနည်းမှုနှင့် အဆိုးမြင်မှုများလို ပြဿနာများအတွက် စိတ်ကျရောဂါကုဆေးများ
အာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်း၊ တက်ကြွလွန်ခြင်းနှင့် တခြားသော အပြုအမူဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက် Stimulants များ
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ရန်လိုခြင်းများအတွက် Neuroleptics များ
အပြုအမူဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းကလည်း အကူအညီရနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ခင်မင်မှုလေ့ကျင့်ခြင်းမျိုးက ကလေးများကို တခြားသူများနှင့် ဆက်ဆံသည့်အခါတွင်လိုအပ်သည့် လူမှုရေးကျင့်ဝတ်များကို သင်ကြားပေးနိုင်ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်လေ့ကျင့်ခြင်းများက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် စဉ်းစားခြင်းနှင့် အကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်မှုကို နားလည်ခြင်းများအတွက် အထောက်အကူရပါသည်။ FAS ကလေးများတွင် ပညာရေးအတွက်လည်း အကူအညီလိုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ကျောင်းတွင်အတော် ကြိုးစားနေရသည့် ကလေးအတွက် သချာၤဆရာငှားပေးတာမျိုး။
မိဘများနှင့် မောင်နှမများကလည်း ထိုကလေးများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင်တွေ့ရမည့် စိန်ခေါ်မှုများအတွက် အကူအညီလိုပါလိမ့်မည်။ ထိုအကူအညီရရန်အတွက် ကုသမှု သို့မဟုတ် အထောက်အပံပေး အုပ်စုများတွင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရပါမည်။ မိဘများကလည်း ကလေးထိန်းပုံထိန်းနည်းသင်တန်းများ တက်ရောက်ရန် လိုနိုင်ပါသည်။ ထိန်းပုံထိန်းနည်းသင်တန်းများက ကလေးကိုဆက်ဆံပုံ ဂရုစိုက်ပုံစိုက်နည်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်များကို သင်ကြားပေးပါလိမ့်မည်။
တစ်ချို့မိဘနှင့်ကလေးများကတော့ ဆေးပညာကုသမှုအပြင် တခြားသောအစားထိုးကုထုံးများကိုလည်း ရှာဖွေတတ်ကြပါသည်။ ထိုကုထုံးများတွင် နှိပ်နယ်ခြင်း၊ အပ်စိုက်ခြင်းတို့လို ကုထုံးများ ပါဝင်ပါသည်။ အစားထိုးကုထုံးများတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယောဂလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောသန္ဓေသားရောဂါ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေလျှင် အရက်ကို လုံးဝဖြတ်ပါ။ အရက်သောက်နေဆဲဆိုပါက ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း သိသိခြင်းရပ်ပါ။ သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်သည်ဟု သံသယရှိရှိချင်း ရပ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်ရပ်ဖို့သာလိုပါသည်။ စောစောရပ်နိုင်လေလေ ကလေးအတွက် ကောင်းလေလေဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်တစ်လျှောက်လုံး အရက်ကိုရှောင်ပါ။ FAS မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တစ်လျှောက်လုံး အရက်မသောက်ခြင်းဖြင့် လုံးဝကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ကလေးယူနိုင်သည့်အရွယ် လိင်စိတ်တက်ကြွပြီး အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံထားပါက အရက်ကို လုံးဝဖြတ်ထားလိုက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်အများစုမှာ စီစဉ်ထားလို့ရခြင်းမျိုးမဟုတ်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းကာလများတွင် ပျက်စီးမှုများနိုင်ပါသည်။ အရက်နှင့် ပြဿနာရှိနေသူဆိုပါက ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် အရင်အကူအညီရယူပါ။ အရက်စွဲမှုလယ်ဗယ်၊ ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ရာ ကျွမ်းကျင်သူနှင့် အကူအညီရယူပါ။
(Learn about Fetal alcohol syndrome. What are the symptoms, the causes and how to treat this condition? What can we do to cope and prevent its symptoms?)